Casharka 22: Araga (Synen) iyo hoos u dhaca awooda darawalnimo (Nedsatt förmåga) | Somaliska Online Skolan
Casharka 22: Araga (Synen) iyo hoos u dhaca awooda darawalnimo (Nedsatt förmåga)
Casharkaan waxaan ku eegeynaa macluumaad la xiriira arraga (Synen) iyo dareenka qofka saameeynta uu ku yeesho wadada. Waxaan kale oo eegeynaa marka ay hoos u dhacdo awooda daralnimo ee qofka (Nedsatt förmåga).
Araggu waa waa dareenka ugu muhiimsan marka aad wadada ku jirto. ilaa 90% macluumaadka wadada ayaa waxaa laga helaa indhaha sidaa darteed ayay qasabtahay marka qofku uu dalbanayo warqadaha körkortstillstånd ee laysanka B ay indhahiisa yihiin ugu yaraan 0.5.
Haddii aragaaga uu liito ayaa körkorta waxaa lagu siin karaa haddii aad okiyaale xirato. Maadaama awooda indhaha ay isbedelaan ayaa waxaa lagu taliyaa in qofku uu si joogto ah indhahiisa u baaro.
Eray bixin ku saabsan araga (Synbegrepp)
Synfält – Waa inta dhulka ee indhahaaga ay qabtaan. Synfält waxa uu yahay mid kalabar ah 180°.
Direktseende – Waa inta uu qofku indhaha ku haayo. Waxay guud ahaan arraga ka tahay 1-2% waayo waa inta yar ee aad eegeyso sida marka aad isku daydo in aad akhriso farta ku qoran calaamadaha wadada.
Periferiseende – Qeybtaan waa inta kale ee araga, sida aan kor ku soo sheegnay araga tooska ah ayaa ah 1-2% sidaa darteed aragaan waa 98-99% waa araga guud oo ay ku jirto waxyaabaha aad ka aragto geesaha. Markii aad dareento wax fiiro gaar ah u baahan ayaad isticmaalaysa Direktseende si aad xooga u saarto. Araga Periferiseende waxaa hoos u dhiga qamriga iyo daalka.
Maalinta oo dhan waxa ay indhahaaga ururinayaa macluumaadka wadada kuwaasoo loo diro maskaxda si ay qiimeyn ugu sameyso. Macquul ma ahan in aad qiimeyso dhamaan waxyaabaha ay indhahaaga qabtaan, haddii kale maskaxda ayaa buuxsameysa.
Halkii ay waxkasta ka qiimeyn lahayd ayay maskaxdu qiimeysaa waxyaabaha ay u aragto muhiim taasoo ku xiran dhowr arimood..
Waayo aragnimadaada (Erfarenheter)
Waxyaabaha aad fileyso (Förväntningar)
Waxyaabaha aad daneyso (Intressen)
iyo dareenkaaga (Känslointryck)
Haddii aqoontaada ay kuu sheegayso in baabuurta la dhigay ka hor isgoyska ay qataryihiin, oo aad waayo aragnimo u leedahay in caruur ay si lama filaan ah uga soo bixi karaan baabuurta. Maskaxdaada waxay go’aamineysaa in ay xooga saarto oo qiimeynta ugu badan ku sameyso baabuurta iyada oo iska dhaafeysa waxyaabaha kale.
Eray bixin muhiim ah oo ku saabsan mowduucan ayaa waxaa ka mid ah
Varseblivning – Waa marka qofku uu digtoon yahay waxyaabaha agagaarkiisa ka dhacaya.
Selektiv varseblivning – Waa marka qofku uu doorto waxyaabo qaas ah oo uu xooga saarayo.
Wadayaasha waayo araga ah
Waxay leeyihiin aragti dhaqdhaqaaq leh oo degan
Waxay xooga saaraan waxyaabaha dhaqdhaqaaqaya
Masaafada araga (Observationsområdet) waa mid balaaran oo dheer.
Wadayaasha aan waayo araga ahayn
Waxay indhaha ku hayaan shayaasha waqti dheer.
Waxay xooga saaraan waxyaabaha aan dhaqaaqeyn
Masaafada araga waa mid gaaban oo ciriiri ah.
Qalad wax u arkida (Synvillor (illusioner))
Mararka qaar ayaa dhacda in bani’aadamku ay si qaldan wax u arkaan taasoo abuurta aragti qaldan Synvillor.
Tusaalooyin la xiriira aragtida qaldan (Synvillor )
Baabuurta halka nal leh ayaa abuuri kara aragti qaldan.
Qiiqa barafka ayaa abuuri kara in aad lumiso jihada.
Mootooyinka dheereeya oo aad u maleyso mid socod gaaban.
Araga tannalka (Tunnelseende)
Tunnelseende macnaheeda waa marka ay yaraato balaca indha indhaynta (avsökningsområde ) ee qofka. Waxaa qofka ku adkaaneysa in uu arko waxyaabaha ka dhacaya hareeraya wadada. Waxay la midtahay sida aragaaga uu yahay marka aad tannal dhexmareyso.
Qatarta ka dhalan araga tannalka waxaa siyaadiya..
Maqalka (Hörsel) waxa uu darawalada ka caawiyaa in ay maqlaan haddii qof hoon kugu yeerinayo ama marka baabuurta gargaarka degdega ah ay soo dhowyihiin. Waxaa kale oo lagu maqlaa haddii matoorka uusan shaqeyneyn.
Känseln och balanssinnet – dareenka iyo dareenka balansiga waxa uu wadaha ku caawiyaa in uu dareemo sida baabuurku wadada ugu socdo iyo xaalada wadada.
Luktsinnet – Urintu waxay caawisaa in qofka uu dareemo haddii qiiqa baabuurka ee aan la arki karin uu gadaha baabuurka soo galo.
Hoos u dhaca awooda darawalnimo
Qaybtaan waxaan ku eegeynaa marka awooda darawalnimo ee qofka ay hoos u dhacdo sida cuuryaanimada.
Dadka naafada ah (Funktionshinder (handikapp)
Cuuryaanimadu waa marka qofku uusan awoodin waxyaabaha laga doonayo.
Naafanimada qaarkeed ma ahan mid korka ka muuqata, sidaa darteed ayaa la doonayaa in waqti la siiyo dadka nuucaas ah.
Synligt funktionshinder waa dadka cuuryaanka ah ee muuqda, waxay wadan karaan baabuurka cuuryaanka (Rullstol) iyo ul cadaan ah (vit käpp).
Dolt funktionshinder – Waa cuuryaanka qarsoon oo ay ka midyihiin dhagoolayaasha ama dadka cudurada kale qaba sida suuxida (epilepsi).
Dadka indhaha naafada ka ah (Synskadade & blinda)
Dadka indhoolayaasha ah waxay qaadan karaan cul cadaan ah marka ay wadada ku jiraan balse waajib kuma ahan. Ushaas waxaa loogu talagalay in ay hogaamiso balse sidoo kale waxay dadka kale u sheegeysaa in qofku indhoole yahay.
Fariimaha qofka indhoolaha ah
Rakt ner mot marken - Waa marka qofku usha hoos u taagayo, markaas waa uu sugayaa oo dhageysanayaa.
Snett framåt - Marka uu usha horey u taagayo waxa uu doonayaa in uu socdo.
Marka aad gudbineyso qof indhoole ah
Marka aad sugeyso qof indhoole ah oo goynaya wadada waxaa lagaa doonayaa.
In aad boos fiican ka istaagto halka wadada dadku ka gooyaan (marginal)
Ka digtoonoow dhawaqa. Matoorka ha sheelareyn oo hoonka ha isticmaalin ilaa in xaalad degdeg ah jirto mooyee.
Ha dhaqaaqin ilaa qofka uu ka baxo guud ahaan wadada. Dhawaqa sheelaha ayaa qofka jahwareer galin kara.
Eeyaha hogaamiya (Ledarhund)
Waxaa ku xiran suun cadaan ah ( vit sele)
Waxay ku caawiyaan qofka indhoolaha ah in uu dareemo caqabadaha balse eeyga awood uma leh in uu qiimeeyo xaalada wadada.
Marnaba waa in aan la rabshid oo aan lala hadlin eeyga.
Waayeelka iyo wadada
65-74 sano dadka da’dooda tahay waxay leeyihiin waayo aragnimo iyo qaangaarnimo wanaagsan oo ay ku qiimeeyaan wadada. Waxay ku socdaan si ka amaan badan dhalinyarada da’dooda tahay 18-19. 75+ sano waxaa lagu yaqaanaa in awooda indhaha ay hoos u dhacdo isla markaana awooda wadnaha ay daciifto. Qatarta wadada ee dadkaan ayaa ka badan dadka caadiga ah 5-6 jeer taasoo la mid dhigeysa dhalinyarada da’dooda tahay 18-19. Balse waayeelkaan waa kuwo qaangaar ah taasoo awood u siineysa in ay qiimeeyaan awoodooda iyaga oo ka fogaada in ay socdaan amaankii iyo waqtiyada saxmada.
Waxyaabaha da’da la xumaada
Isku dheeli tirka
Waqtiga ficilka (Reaktionstiden).
In ay si sax ah oo deg deg ah wax u turjumaan.
Ugu dambeyntii waxaa mamnuuc ah in dadka la qasbo marka ay wadada goynayaan. Waa in aadan ku riixin qofka wadada geeskeeda taagan oo aan dooneyn in uu wadada gooyo adiga oo istaagaya ka dibna faraya in uu wadada gooyo.
← Casharka 21: Daalka (Trötthet )
Casharka 23: Caruurta (Barn) iyo wadada →